नेपाल आयल निगमले बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक सातामै दुई पटक, प्रतिलिटर कति ? - Nepalpatra Nepalpatra नेपाल आयल निगमले बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक सातामै दुई पटक, प्रतिलिटर कति ? - Nepalpatra
नेपाल आयल निगमले बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक सातामै दुई पटक, प्रतिलिटर कति ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आज मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ । डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल आन्तरिक हवाई इन्धनकाे भाउ लिटरमा दुई रुपैयाँले बढाइएको निगमले जनाएको छ ।
बढेको मूल्यपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर ११४, डिजेल तथा मट्टितेलकाे ९७ र आन्तरिक हवाई इन्धनको भाउ ६७ रुपैयाँ कायम भएको छ । मूल्य बृद्धि भएपश्चात् पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ८२ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटरर ४ रुपैयाँ १३ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा २९५ रुपैयाँ ८३ पैसा घाटा छ । अर्धमासिक रुपमा करिब ८६ करोड ७८ लाख घाटा नै रहने छ ।
सो घाटा रकम मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा निगमको सञ्चित नाफाबाट व्यवसथापन गरिनेछ । मूल्य बृद्धि भएपश्चात् पनि भारतीय सीमा रक्सोलसँग जोडिएको नेपालको वीरगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँ २९ पैसा र डिजल प्रतिलिटर ४१ रुपैयाँ ४३ पैसाले नेपालतर्फ सस्तो रहेको निगमका प्रवक्ता उपाध्यायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।